Chimpanzee, Nnụnụ, Nchekwa anụ ọhịa ka kwụsịrị na Uganda Bugoma Forest
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Chimpanzee, Nnụnụ, Nchekwa anụ ọhịa ka kwụsịrị na Uganda Bugoma Forest
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Na Uganda, Chimpanzee Sanctuary and Wildlife Conservation Trust, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), ECOTRUST, Uganda Tourism Association, Association of Uganda Tour Operators (AUTO) Association for Conservation of Bugoma Forest and Tree Talk Plus na -alụ ọgụ maka A ga -echekwa oke ọhịa Bugoma.
Ndị ọrụ isii Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) gụnyere CEO Dickens Kamugisha ka ejidere ma jide ya na Uganda na ọdụ ndị uwe ojii Kiira, Kampala na 22nd October 2021 maka ịrụ ọrụ na-enweghị ikike.
Ekwenyere nke a na tweet ezigara na ibe AFIEGO na Twitter obere oge ejidere.
AFIEGO nọ na etiti mkpọsa #saveBugomaforest na ọdịda anyanwụ Uganda mgbe ala Bunyoro Kitara nyere Hoima Sugar Limited ka hekta 5,779 nke oke hekta 41,144.
Ụlọ ọrụ Africa maka ọchịchị ike (AFIEGO) bụ ụlọ ọrụ Uganda na-eme nyocha gbasara amụma ọha na eze iji mee ka atumatu ume na-abara ndị ogbenye na ndị na-adịghị ike uru.
Kemgbe Ọgọstụ 2020, mgbe ndị na-agụ akwụkwọ na-ebigbọ ndụ dị ka akụkụ nke ọrụ mmepe okpete na-ese okwu, ndị bi na ndị otu obodo nọ n'okpuru mkpọsa Save Bugoma Forest na-alụ ọgụ megide oke iwu.
Njide a bịara ka mkpebi ụlọ ikpe dị elu nke Uganda Musa Sekana kpebiri na Septemba 2021.
Ka e mechara mkpebi nke Alaeze ahụ ịgbazinye akụkụ nke ọhịa ahụ mgbe AFIEGO na Water and Environment Network (WEMNET) gbara akwụkwọ n'ụlọọrụ National Environment Management Agency (NEMA) maka ịkwado akụkọ nyocha gburugburu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya (ESIA).
Hoima Sugar Limited gosipụtara akụkọ a n'ụzọ na -ekwu na ebe nchekwa ha chọrọ iji maka mmepụta shuga dị n'ala ahịhịa jọrọ njọ na ọ naghị emetụta oke oke ọhịa. Ekwuru na ọ dị n'akụkụ oke ọhịa Bugoma n'agbanyeghị onyonyo satịlaịtị na -egosi ihe dị iche.
Ọhịa Bugoma bụ ọhịa ebe okpomọkụ echekwara nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ Hoima na ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo Kyenjojo, na ọwụwa anyanwụ nke Ọdọ Albert, na mpaghara Hoima nke ọdịda anyanwụ Uganda. Edere ya na 1930 wee bata n'okpuru ikike nke National Forestry Authority na 2003
Na 1st August 2016, Uganda Land Commission nyere aha ala maka hectare 5,779 (22 Square Miles) na ala eze Bunyoro Kitara nke
Ebere ala ahụ ozugbo Hoima Sugar. N'ọnwa Mee afọ 2019, onye ọka ikpe mpaghara Masindi, Wilson Masalu tụkwasịrị akaebe nke kọmishọna ala na ihe osise, Wilson Ogalo na -ekpe ikpe megide National Forestry Authority (NFA) na
Onye ọka ikpe kpebiri dabere na akaebe ahụ, a ga-atụle hectare 5,779 nke Bugoma Forest Reserve dị na mpụga ọhịa ahụ.
Ya mere, a na -achị ya na ala esemokwu bụ nke Omukama (Eze Bunyoro). Mkpebi a meghere alaeze ahụ ohere ịgbazinye Hoima Sugar ala ahụ.
Atụmatụ ndị kọmishọna Ogalos bụ ihe e ji mara ya na-esochi agọnarị ya n'oge nyocha yiri nke ahụ maka mbibi nke ọhịa Kisankobe na mpaghara Mukono na Ọktoba 2020.
Kamgusha duziri, mkpọsa #SaveBugomaForest mechara rute Rt. Onye isi oche onye omeiwu Uganda Jacob L'Okori Oulanyah Chambers na Tọzdee 9th Septemba 2021.
Obodo ndị bi na gburugburu ọhịa Bugoma kpọrọ oku maka nchekwa nke ọhịa Ha chọkwara ka ndị omeiwu kparịta ụka maka ịchekwa oke ọhịa ahụ. Mkpegharị a dị na akwụkwọ iwu kemgbe Septemba 28, 2021.
Edebere arịrịọ na ntinye iji kwụsị mbibi nke Bugoma Central Forest Reserve.
Ihe karịrị puku mmadụ iri abụọ bi n'ime obodo iri atọ na ise dị na Kikuube na Hoima bịanyere aka n'akwụkwọ arịrịọ a.
Mpaghara ndị a bụ ebe oke ọhịa dị egwu. Umu anumanu n'ime oke ohia gunyere Uganda Mangabey, Chimpanzees, na ndu nnunu.
Arịrịọ ahụ rịọrọ ka akwụsịtụ mbibi na -aga n'ihu nke oke ọhịa Bugoma ma chekwaa ndụ ndị obodo ma chekwaa ihe nketa sitere na Uganda.
Onye isi okwu ahụ nyefere okwu a na kọmitii ndị omeiwu na gburugburu ebe obibi.
Ndị otu obodo ndị ọzọ gụnyere Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), Mmiri na gburugburu, Media Network (WEMNET), Chimpanzee Sanctuary na Wildlife Conservation Trust kwadoro, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), ECOTRUST, Uganda Tourism Association, Association of Uganda Tour Operators (AUTO) Association for Conservation of Bugoma Forest and Tree Talk Plus.
N'agbata Ọgọstụ na Septemba, achọtala enyí ọhịa na chimpanzees abụọ nwụrụ na mpaghara ọhịa nke oke ọhịa n'ihi ọgụ a nke anụ ọhịa na anụ ọhịa ka ụmụ anụmanụ na-agbari mmiri mmiri mgbe oke ọhịa na-amanye ha ịchọ nri n'ubi ndị nwe ya. n'obodo ndị dị n'akụkụ.
Kemgbe mkpochasị ọhịa malitere, chimpanzees na ìgwè anụ ọhịa na -agba ọsọ ebusola ndị obodo bi na gburugburu ya ọgụ ma wakpo ihe ọkụkụ ha.
AFIEGO anọwokwa n'okpuru nnukwu nrụgide n'ihi ịgbachitere ikike obodo ndị mmanụ metụtara na mpaghara Hoima. Ọ bụ ihe ịtụnanya na alaeze Bunyoro Kitara na -agbachitere ha.
N'ọnwa Septemba 2020, ejidere Venex Watebawa na Joshua Mutale, ndị nta akụkọ WEMNET na Hoima ka ha na -aga ihe ngosi okwu redio na Spice FM.
Ndị uwe ojii Uganda nwara igbochi mkpọsa#savebugomaforest.
Mkpochapụ AFIEGO bụ nke kachasị ọhụrụ n'ime usoro njide kemgbe n'August 2020, ọtụtụ ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị na-etinye aka na ọrụ ndị ruuru mmadụ, ndị ọrụ mmepụta mmanụ na gburugburu ebe obibi metụtara kwụsịrị ọrụ ha mgbe ha kpochapụrụ gọọmentị na mpaghara ahụ. ụzọ na -ezighi ezi.
Kọmịshọna mpaghara Kikube Amian Tumusiime dị na nkwekọrịta ka ọ na-ebo ụfọdụ ụlọ ọrụ gọọmentị etiti na alaeze Bunyoro Kitara ebubo nrụrụ aka maka enweghị imepe oke oke ọhịa Bugoma mgbe ọ na-aza ajụjụ banyere nchegbu nke mkparịta ụka nchekwa obodo nke otu mmegide mgbochi nrụrụaka haziri. .